Taa na Akụkọ ihe mere eme: 14 August 1911 nke entallọ Ọrụ Oriental Railways - RayHaber
HomeGeneralTaa na Akụkọ ihe mere eme: 14 August 1911 nke entallọ Ọrụ Oriental
Companylọ ọrụ Sark Railways
14 August Ọ bụ n'ihi mkparịta ụka n'etiti 1869 Porthole Company na Porte, e mere ndokwa maka ụlọ ọrụ ahụ.
14 August Ndị uwe ojii nke 1911 Oriental Railways Company kwere ka ebu ngwá agha. E kpebiri inye ndị ụlọ ọrụ ngwá agha ahụ.
14 August Ọ bụ ọrụ 1944 Beşiri-Garzan (23 km).
Taa na akụkọ ihe mere eme: 14 August 1911 ka ndị nche nchebe nke ụlọ ọrụ okporo ụzọ ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa ... 14 / 08 / 2012 14 August Ọ bụ n'ihi mkparịta ụka n'etiti 1869 Porthole Company na Porte, e mere ndokwa maka ụlọ ọrụ ahụ. 14 August Ndị uwe ojii nke 1911 Oriental Railways Company kwere ka ebu ngwá agha. E kpebiri inye ndị ụlọ ọrụ ngwá agha ahụ. 14 August Ọ bụ ọrụ 1944 Beşiri-Garzan (23 km).
Taa na akụkọ ihe mere eme: 14 August 1911 A na-ekwe ndị nche nchebe nke ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa ka ha buru ngwá agha ... 14 / 08 / 2015 Taa na akụkọ ihe mere eme nke 14 August 1869 Porthole Company na Babıali mgbe a kwụsịrị mkparịta ụka maka ụlọ ọrụ ahụ. 14 August 1911 Ndị uwe ojii okporo ụzọ nke ndị ọrụ okporo ụzọ na-ekwe ka ha buru ngwá agha. E kpebiri na ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ngwá agha ahụ. 14 August 1944 Beşiri-Garzan line (23 km) abanyela ọrụ.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 14 August 1911 bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ okporo ụzọ ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa ... 14 / 08 / 2016 Taa na akụkọ ihe mere eme nke 14 August 1869 Porthole Company na Babıali mgbe a kwụsịrị mkparịta ụka maka ụlọ ọrụ ahụ. 14 August 1911 Ndị uwe ojii okporo ụzọ nke ndị ọrụ okporo ụzọ na-ekwe ka ha buru ngwá agha. E kpebiri na ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ngwá agha ahụ. 14 August 1944 Beşiri-Garzan line (23 km) abanyela ọrụ.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 17 Disemba Iji dozie esemokwu n'etiti 1907 Porte na Orient Railways Company ... 17 / 12 / 2012 Taa na History 17 December Onye mbụ bụ Minista Minista nke Spen, Monsieur Moret, ahọpụtala onye nke ise iji dozie esemokwu n'etiti 1907 Porte na ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè Oriental.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 17 Disemba Iji dozie esemokwu n'etiti Porte nke 1907 na ụlọ ahịa okporo ụzọ nke Orient ... 17 / 12 / 2014 Taa na History 17 December Onye mbụ bụ Minista Minista nke Spen, Monsieur Moret, ahọpụtala onye nke ise iji dozie esemokwu n'etiti 1907 Porte na ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè Oriental.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 12 March 1911 Na-egosi nkwekọrịta ọzọ na ndị Germany na Baghdad Railways 12 / 03 / 2015 Taa na History 12 March 1911 Debanyere nkwekọrịta ọzọ na ndị Germany na Baghdad okporo ụzọ. A tụlere ihe ndị mejupụtara. A gbahapụrụ agbaba Baghdad-Basra Gulf na ọdụ ụgbọ mmiri.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 12 March 1911 Baghdad Railways 12 / 03 / 2016 Taa na History 12 March 1911 Debanyere nkwekọrịta ọzọ na ndị Germany na Baghdad okporo ụzọ. A tụlere ihe ndị mejupụtara. A gbahapụrụ agbaba Baghdad-Basra Gulf na ọdụ ụgbọ mmiri.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 12 March 1911 Baghdad Railways ... 12 / 03 / 2017 Taa na History 12 March 1911 Debanyere nkwekọrịta ọzọ na ndị Germany na Baghdad okporo ụzọ. A tụlere ihe ndị mejupụtara. A gbahapụrụ agbaba Baghdad-Basra Gulf na ọdụ ụgbọ mmiri.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 12 March 1911 Baghdad Railways 12 / 03 / 2018 Taa na History 12 March 1911 Debanyere nkwekọrịta ọzọ na ndị Germany na Baghdad okporo ụzọ. A tụlere ihe ndị mejupụtara. A gbahapụrụ agbaba Baghdad-Basra Gulf na ọdụ ụgbọ mmiri.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 12 March 1911 Banyere ndị Germany na Baghdad okporo ụzọ. 12 / 03 / 2012 12 March 1911 Ekwadoro nkwekọrịta ọzọ na ndị Germany na Baghdad okporo ụzọ. A tụlere ihe ndị mejupụtara. A gbahapụrụ agbaba Baghdad-Basra Gulf na ọdụ ụgbọ mmiri.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 14 August 1911 ka ndị nche nchebe nke ụlọ ọrụ okporo ụzọ ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 14 August 1911 A na-ekwe ndị nche nchebe nke ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa ka ha buru ngwá agha ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 14 August 1911 bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ okporo ụzọ ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 17 Disemba Iji dozie esemokwu n'etiti 1907 Porte na Orient Railways Company ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 17 Disemba Iji dozie esemokwu n'etiti Porte nke 1907 na ụlọ ahịa okporo ụzọ nke Orient ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 12 March 1911 Na-egosi nkwekọrịta ọzọ na ndị Germany na Baghdad Railways
Taa na akụkọ ihe mere eme: 12 March 1911 Baghdad Railways ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 12 March 1911 Banyere ndị Germany na Baghdad okporo ụzọ.